Izinqolobane Zokuzijabulisa Nemisebenzi - IntoKildare
Yenza inhliziyo yakho igijime ngokuzijabulisa kwangaphandle, uzwe isimanga sezifundo zegalofu ezisezingeni lomhlaba, noma uthambise umphefumulo ophethwe kakhulu ngesikebhe sokungcebeleka ezansi nemisele edumile yaseKildare.
Izinjabulo nokuchitheka e-Co Kildare akugcini nje kuphela emidlalweni yamahhashi - isifunda futhi siyikhaya lezikhungo eziningi ezihamba phambili ze-Ireland zokugcina ama-adrenalin junkies ejabule. Kusuka ekusakazeni uLewis Hamilton wakho wangaphakathi ku- UMondello ukushaya ngomnsalo ne-paintball e Ama-redhill, IKildare yindawo enhle yokugcina ama-sulks asemasha (futhi azikho izikrini ezibonakalayo!).
Cabanga ngemisebenzi yangaphandle negalofu nakho kungafika engqondweni. Minyaka yonke, izifundo zethu ezihlonishwayo nezasendulo zibiza izinkulungwane zabadlali begalufu abavela kuwo wonke umhlaba ukuthi bazobona lo mdlalo.
Ukuhamba ngesikebhe nokuhamba ngomkhumbi eKildare kungokuhlangenwe nakho okujule kakhulu kunenjabulo esheshayo yokuba semanzini. Lapha, uhambo emizileni yethu yamanzi luhambo oluya esikhathini esedlule. Ngoba uhamba imizila efanayo yamanzi — futhi ujabulela izindawo ezifanayo — ebezisetshenziswa abantu abaningi emakhulwini eminyaka ngaphambi kwakho. Ngemifula nemisele engamakhilomitha angama-82, iKildare yipharadesi labathandi bamanzi.
Imicimbi yezinkampani ewina imiklomelo nemisebenzi yokwakha amaqembu amaqembu angama-10 - 1000+.
Umgwaqo wokunethezeka owenziwe ngendlela ehambile unqamula i-Ireland.
Akukho okudlula injabulo yosuku emijahweni yaseNaas. Ukudla okuhle, ukuzijabulisa nokujaha!